शब्दकोश: स्वर्गीय सरोवरतिर दुई दिन
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, December 08, 2008
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) December 08, 2008
सारै राम्रो ब्लग - मिठो सब्दहरुको समायोजन । CAFE मा प्रकिती र प्रवृती को फ्यूजन - गजब को ।
दीपक जडित December 08, 2008
धाईबाजी , सुन्दर यात्रा अनि सुन्दर गन्तब्य त तस्विरले नै बतायो । यात्राको बखान पनि संक्षिप्तमै सबै खोलीदिनु भएको छ यौटै गुनासो के रहयो भने यो रौता पोखरी उदयपुरमै हो कि उदयपुरबाट अन्यत्रै कतै जानुपर्ने हो ? यसो भौगलिक अवस्थितीको पनि भनक दिनुभएको भए पढ्दा अथवा तस्विर हेर्दा अझै मज्जा आउनेथियो जस्तो लाग्यो । मैले यो रौता पोखरी थाहा नपाएर पनि त्यस्तो लागेको हुनसक्छ ।
Basanta Gautam December 08, 2008
सुन्दर तस्बीरहरुको माध्यमबाट स्वर्गको केहि झलक हामीसंग पनि बाँड्नुभएकोमा हार्दिक धन्यबाद!
Dilip Acharya December 08, 2008
दीपक जीलाई जस्तै मलाई पनि यो स्थानको भौगोलिक अवस्थितीको जिज्ञासा रह्यो । बाँकि तपाईका तस्विर बिलेका मात्रै छैनन। तपाईका तस्विरले गित पनि गाएका छन, कथा पनि भनेका छन अनि प्राकृतिक छटाका शुन्दरताका केहि अंश हामिलाई बाँडन समेत सफल भएका छन ।
लाग्छ शब्दको मात्रै हैन तपाईसंग तस्विर उतार्ने कला पनि जादूमय छ ।
आकार December 08, 2008
निकै रमाइलो गर्नुभएछ । साथ मा त्यती राम्रा फोटाहरु !
जोतारे धाइबा December 09, 2008
जिज्ञासा र चासोको लागि आभारसहित छुटफुट कुराको लागि माफी चाहन्छु ।
रौता पोखरी उदयपुर जिल्लाकै पहाडी भेगमा पर्ने विकटताबीचको सुन्दर ठाउँ हो । यसै पोखरीको नामबाट यस क्षेत्रलाई रौता गा वि स को नाम दिइएको छ । यो त्यस क्षेत्रको पवित्र धार्मिक स्थल हो । नगर क्षेत्रबाट केही दुरी गाडीमा छिचोलेर केही पैदाल जानुपर्ने रौता पोखरी सकिने रौता पोखरी मजाले हिड्यो भने एकै दिनमा पुगेर फर्किन सकिन्छ । जुन पोखरीमा कुनै पात पतिङगर रहँदैन भन्ने धर्मिक जना विश्वास रहेको पाईन्छ । पात खस्यो भने चराले टिपेर लैजान्छ रे !
हुन पनि पोखरी सधैं कन्चन देखिन्छ ।